Sida loo dayactiro kala qaybsanaanta zip faylka? - DataNumen
Si loo hagaajiyo kala qaybsanaanta zip faylka (u qaad magaca faylka inuu yahay 'mysplit).zip'), fadlan samee sida soo socota:
1. Download DataNumen File Splitter oo ku rakib kumbuyuutarkaaga.
3. Dhagsii badhanka "Ku biir".
4. Wadahadalka "Ku biir", xulo dhammaan faylasha kala jaban oo ku dar liiska faylka ilaha.
5. Hubso in amarka qaybaha kujira liistada uu la mid yahay amarkoodii asalka ahaa, taasi waa, mysplit.z01 waa kan 1aad iyo mysplit.z02 waa midka labaad, iwm iyo mysplit.zip waa tii ugu dambeysay.
Adeegso badhanka "Move Up" iyo "Move Down" si aad u hagaajiso amarkooda haddii loo baahdo. Haddii hal qeyb la seego ama musuqmaasuq ku dhaco, markaa waad iska indha tiri kartaa, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad ilaaliso amarkooda. Tusaale ahaan, haddii qeybta 2 la seegay, markaa kaliya iska hubi in qaybaha ku jira liiska ay yihiin mysplit.z01, mysplit.z03,…, mysplit.zip.
6. Deji magaca faylka aad ku socoto, sida mysplit_merged.zip
7. Guji “Start Kusoo Biir ”si aad ugu biirto qaybaha loo galayo feylka mysplit_merged.zip.
8. Kadib marka hawsha ku biirista la dhammaystiro, waadtart DataNumen Zip Repair oo dayactir mysplit_merged.zip sidii caadiga ahayd zip faylka Faylka go'an ayaa ku jiri doona xogta dhammaan qaybaha kala jabka Zip faylka Waad ku furi kartaa caan Zip yutiilitida, sida WinZip, GuulRAR, IWM
biiro, zip file